"Kushambidza maoko" marongero emavara akachinjwa muwatchOS 7.2 | Ndinobva mac
'Kushambidza maoko' zvinyorwa zvakachinjwa muWatchOS 7.2
Zvinogoneka kuti vanopfuura mumwe chete vakaona ruzivo mushure mekumisikidzwa kwe iyo nyowani vhezheni yeWOSOS 7.2 iri mune basa «Kugeza maoko» imwe dhizaini inoratidzwa kwatiri mune yekupedzisira zvinyorwa zvechiito.
Pakutanga, iwo mavara akaonekwa aine dhizaini akafanana neaya ekuverengera nhamba ivo pachavo, asi izvi zvachinja mune yazvino vhezheni yesystem yakaburitswa naApple. Haisi chimwe chinhu chinoshandura mashandiro echishandiso kana chakafanana, ingori shanduko diki mukugadzirwa kwechinyorwa icho chave chadzikira.
Iyo yepamusoro yekubatwa inotiratidza iyo yazvino dhizaini uye kunyangwe iyo isingakanganise iko kushanda kwayinotiratidza isu kusvika pamwero wakadii iyo Cupertino kambani inotarisa pane izvo zvinyorwa zveayo mitsva vhezheni. Mune ino kesi, uye pachangu kutaura, ndakafarira yapfuura typeface zvirinani neiyo yakafanana dhizaini sekuverenga pachako, asi kuravira mavara.
Isu tinokwanisa kumisa kana kudzima basa iri kubva kuWatch application mukati medu iPhone uye ipapo tinogona kumisikidza zviyeuchidzo ivo pachavo, kana tichida kuti 20-yechipiri timer kuti ishandiswe kana kwete otomatiki kana tichiita chiito chekugeza maoko edu kana kunyangwe kana tichida iyo Apple Watch pachayo inotiyeuchidza kuti isu tinofanirwa kugeza maoko edu. Ichi chiito chinoratidzika kunge chakagadzirwa kuyera kwenguva yatiri kurarama asi zvinoenderana naApple chaive chinhu chavainge vatoronga kuisa muApple Watch yavo kare. Rangarira kugeza maoko ako kazhinji kudzivirira matambudziko neCOVID-19 uye mamwe mavhairasi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » 'Kushambidza maoko' zvinyorwa zvakachinjwa muWatchOS 7.2
Apple TV + inovandudza "Muranda" mwaka wechitatu pamberi pekutanga kweyechipiri
Kana iwe uine matambudziko neAirPods Max, aya ndiwo marongero avakaita